Tawabar loo qabtay Shaqaalaha Wasaaradaha Puntland oo Boosaaso ka dhacay+Sawiro – SBC
Tawabar loo qabtay Shaqaalaha Wasaaradaha Puntland oo Boosaaso ka dhacay+Sawiro
Posted by Webmaster on December 26, 2011 Comments
Siminaarkan ayaa wax uu ka Dhacay Hoteelka Juba ee Magaalada Boosaaso.waxaana loo qabtay Shaqaalaha Wasaaradaha Puntland ee Gobalka Bari Waxaana Bixinaysay Hayada J.R.T oo iyadu hawlo badan ka qabata deeganada Puntland.
Ugu horayntii waxaa Siminaarkaas furay Agaasimaha waaxda Warfaafinta Isgaarsiinta iyo Hidaha iyo Dhaqanka Maxamuud Fuube oo isagu mahada balaaran u jeediyay dhamaan ka soo qayb galayaashii Siminaarka ee ka socday shaqaalaha Wasaaradaha Puntland ee Gobalka Bari,isagoo sidoo kale u mahad celiyay Hayada J,R,T.waxaana dhamaan dadka uu u sheegay inay dhaga.hooda u furaan wax ay dababarayaasha bixinayah Siminaarka ay u sheegayaan si ay hadhoow u gudbiyaan isagoo sheegay in wax maanatya ay bartaan ay sii gudbin doonan intaa kadiba wax uu furay siminaarkii .
Sidoo kale waxaa halkaa ka hadlay C/rixmaan Ciise oo isagu ku hadlayay magaca Hayada J.R.T.waxana uu sheegay in hayada ay wax badan ka qabato Deegana Mamulka Puntland isagoo sheegay in manta shqaalah wasaaradah la siin doono siminaarkan ,waxaana uu dhamaan ka soo qayb galayaashii uu u sheegay in loo bahan yahay in figrdah lays dhaafsado .
Intaa kadib waxaa la guda galay siminaarkii iyadoo dhamaan dadkii halkaas ku sugnaa ay ahayeen kuwo u dayaar ah in ay waxbadan korarsadaan .wax ay inta badan lays waydiinayay fikaradaha uu qof walba ka qabo in ay caruurtu hesho fursad ay ku ciyaaraan xiliyada qaarkood.
Ugu dabayntii waxaa soo xiray Siminaarka Agaasimaha waaxda Warfaafinta Isgaarsiinta iyo Hidaha iyo Dhaqanka Maxamuud Fuube oo isagu sheegay inay wax badan uu ka faa,iday siminaarka .
Siminarka ayaa wax uu ahaa mid maanaty oo kaliya ah islamarkaana ay dhamaan dadkii ay sheegen inay waxbadan ka faa.ideen hada kadibna ay filayaan inay helaan kan oo kale iyagoo dhamaana ay balan qaadeen inay sii gudbin doonan wax ay maantay barteen .